နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄ | 2017 ၏စာမျက်နှာ4NAB သတင်းများ | 89 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » နိုဝင်ဘာလ (စာမျက်နှာ 4)
လူမှုမီဒီယာကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ်သင့်အိမ်မှာကွန်ပျူတာ Duration: တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအချိန်နာရီကိုယောဘနှုန်းသည်ယခုအခါလစာ $ 30 start 11 / 24 / 17 အပေါ် posted 11 / 08 / 18 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအချိန်ကျွမ်းကျင်သူရှာကြံမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးအနိုင်ရအလုပ်ဆုချီးမြှင့်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား အသစ်တစ်ခုကိုအွန်လိုင်း startup ၏မြှင့်တင်ရေးနှင့်အတူကူညီပေးဖို့။ ကျနော်တို့ဘယ်သူသိသူတစ်ဦးဦး, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram ကိုများနှင့်အခြားလိုအပ် ...
သာစီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration: အချိန်ပြည့်လစာ $ 40,000 ယောဘသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးထွားလာအစစ်အမှန် estate- join ဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းသတင်းထောက်ရှာနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 11 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းသတင်းထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများ သတင်းအိမ်ခြံမြေအာရုံစူးစိုက်။ သင်, သုတေသနပြုရေးသားခြင်းနှင့်အားဖြင့် US မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းအမှတ်တံဆိပ်တိုးချဲ့အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကစားပါလိမ့်မယ် ...
လိုင်းထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Philadelphia တွင်, PA ဆိုပြီး Duration: TBD လစာ TBD ယောဘကိုကျနော်တို့ကဒီဆုရဝဘ်စီးရီးရာသီနှစ်ခုတစ်ခုအတွေ့အကြုံရှိလိုင်းထုတ်လုပ်သူရှာကြံင့်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 11 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းခြောက်ဦးဖြစ်စဉ်များရှိပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကရုပ်မြင်သံကြားစတိုင် format နဲ့အလုပ်လုပ်ချစ်သောသူနှင့်ဒေသခံသူသည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေပါတယ်။ ...
ခရုဇ်ဒါရိုက်တာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Shipboard - ကမ္ဘာတစ်ဝန်း Duration: Flexible လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘ 11 / 27 / 17 အပေါ် posted 12 / 27 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထားရှိရာအကြီးအအားလပ်ရက်တော်ဝင်ကာရစ်ဘီယံသင်္ဘော, Ltd. မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ အလွန်ကြီးစွာသောန်ထမ်းတွေနဲ့စတင်! အဆိုပါဖျော်ဖြေမှုအဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များကသူတို့အဖြစ်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်သူတို့ရဲ့နေထိုင်သလောက်ပျော်မွေ့ကြောင်းသေချာစေရန်ကူညီပေးသည် ...
ဓာတ်ပုံဆရာ / ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်မြောက်အမေရိကခရီးစဉ် Duration: နိုဝင်ဘာ - ဒီဇင်ဘာလလစာယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုယောဘ 11 / 27 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်မဟာရုရှားအဘို့အလိမ္မာနှင့်လုံ့လရှိသူဗီဒီယို / ဓာတ်ပုံပရော်ဖက်ရှင်နယ် (မီဒီယာညှိနှိုင်းရေးမှူး) ရှာအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား နိုဝင်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာလ 2017 စဉ်အတွင်း Nutcracker ခရီးစဉ်။ ဒီအနေအထားလိုအပ်နှစ်ခုကျွမ်းကျင်မှုအစုံရှိပါတယ်။ အဆိုပါအောင်မြင်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုဖမ်းယူပါလိမ့်မယ် ...
12 /9/ 150 အပေါ် posted ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Franklin, TN Duration: 11 / 27 လစာ $ 17 ယောဘကိုမင်္ဂလာပါအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 12 / 09 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply! Franklin TN 12 /9အတွက် PA ဆိုပြီးရှာဖွေနေ။ တစ်ဦးအပြုသဘောနှင့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိရမည်! ဒါ့အပြင်အတွေ့အကြုံ, လွှတ်ပေးရယူနေတဲ့မီနီဗန်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်သေးသုံးငွေကိုင်တွယ်ရှိရမည်။ မဆိုအသိပညာ ...
Nvidia က 3D တိုက်ရိုက် Technician အ
Nvidia က 3D တိုက်ရိုက် Technician အကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့, CA Duration: တစ်ခုမှာနေ့လစာ TBD ယောဘသည်ဤအတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်အဘို့ဖြစ်၏အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 11 / 27 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply 11 / 25 / 18 အပေါ်တင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အရင်က Nvidia က 3D တိုက်ရိုက်စနစ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သောနည်းပညာရှင်လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကို Join ။ ယခုပင်လျှင်အသေးစိတ်တစ်ဦးစာရင်းပေးသွင်းထားသူများအတွက်ယခု Subscribe? ...
အသံရောနှောကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Nashville, TN Duration: 12 / 7-12 /9လစာ $ 500 / 12 ယောဘသည် 11 / 27 / 17 12 / 07 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply မင်္ဂလာပါအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted! Nashville TN 12 / 7-12 /9အတွက်အသံရှာဖွေနေ။ စားသောက်ဆိုင်မှာအိမ်ရှင်, OTF ရဲ့နှင့်မြို့ပတ်ပတ်လည် SONY FS7 အပေါ်နှစ်ဦးကိုကင်မရာကရိုက်ကူး။ rate ကိရိယာအစုံဆွေးနွေးမှုတက်သည်ဖြစ်ပါသည်, $ 500 / 12 ဒါပေမယ့်သင့်ပါတယ် ...